रुपन्देहीका शैक्षिक संस्थाहरुमा [शुक्रबार] माघ २९ गते के-के भयाे ? [पढ्नुस् एकैठाँउमा]-Nagarikaawaj.com
रुपन्देहीका शैक्षिक संस्थाहरुमा [शुक्रबार] माघ २९ गते के-के भयाे ? [पढ्नुस् एकैठाँउमा]
शनिबार, फाल्गुन १, २०७२
नयाँगाउ उच्च माबिको ५३ औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न :-
बुटवल–१४ मा अवस्थित नयागाउ उच्च माबिको ५३ औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्त बहादुर गुरुङको अध्यक्षता तथा जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो ।
सो अवसरमा विभिन्न प्रतियोगितामा विजेता विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार वितरण तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा प्राचार्य पुरुषोतम भट्टराइले बिद्यालयको प्रतिबेदन पेश गरेका थिए ।
सो अबसरमा सहायक प्रचार्य नरिश्वर पौडेल,त्यस्तैगरि तारा गौतम,डिल्लीराज शर्मा आचार्य,उदयराज काफ्ले,कृष्ण लम्साल,नामबहादुर कुवर,कुल प्रसाद अर्याल, शिक्षक गिता पन्थ,पार्बती केसी ,अभिभाबक सरस्वती अधिकारी,बिद्यार्थि प्रिया क्षेत्री ,शिशिर सापकोटा लगायतले बोलेका थिए । सो अबसरमा राष्ट्रिय कलाकार प्रचण्ड जिसिले आफ्नो प्रस्तुती समेत राखेका थिए ।
भलिबलको उपाधि मणिमुकुन्दलाई :-
एभरेष्ट उच्चमा मावि बुटवलले आयोजना गरेको अन्तर उच्च मावि रनिङ शिल्ड छात्र भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि मणिमुकुन्द उमावि बुटवलले हात पारेको छ ।
शुक्रबार सम्पन्न फाइनल खेलमा मणिमुकुन्दले न्यू लाइट उमाविलाई सोझो ३-० सेट पराजित गर्यो । त्यस्तै न्यू होराइजन उमावि तृतीय भएको छ । होराइजनले क्यानन उमाविलाई पनि ३-० सेटमा पराजित गर्यो । प्रतियोगितामा १६ टिमको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यस्तै छात्रातर्फ भएको फाइनल खेलमा एभरेष्ट निलो प्रथम भएको छ । उसले एभरेष्ट रातोलाई ४-१ ले पराजित गरेको थियो । त्यस्तै दीप बोर्डिङ उमावि तृतीय भएको छ ।
प्रतियोगितामा छात्र-छात्रा प्रथम टिमले १५ हजार, द्वितीयले १० हजार र तृतीयले ५ हजार प्राप्त गरेका छन् । विजेता खेलाडीहरुलाई उच्च मावि शिक्षा परिषद् बुटवलका प्रमुख नोगेन्द्र खनालले पुरस्कार वितरण गरे ।
छात्रा भलिबलमा १२ टिमको सहभागिता रहेको थियो । एभरेष्टले तेस्रो पटक जिल्ला स्तरीय अन्तर उमावि रनिङ शिल्ड छात्र तथा प्रथम जिल्ला स्तरीय छात्रा भलिबल प्रतियोगिता गरेको हो । कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गमप्रसाद रेश्मी, विद्यालयका प्राचार्य कृष्ण न्यौपाने, सह–प्राचार्य माधव आचार्य, भलिबल संघका केन्द्रीय सदस्य टुकबहादुर क्षेत्री, जिल्ला अध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठ, अभिभावक संघका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली लगायतले बोलेका थिए ।
एलबी नमूनाको वार्षिक उत्सव :-
बुटवल–१५ मा अवस्थित एलबी नमूना ऐकेडेमीले शुक्रबार आफ्नो १९ औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लालप्रसाद बस्यालको अध्यक्षता तथा विद्यालय निरीक्षक रामकृष्ण पछाईको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो ।
सो अवसरमा विभिन्न प्रतियोगितामा विजेता विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार वितरण तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएका थिए ।
कार्यक्रममा प्याब्सन रुपन्देहीका सचिव विनोद ज्ञवाली, अभिभावक तोयनाथ पौडेल, शिक्षक विष्णु शर्मा, विद्यार्थी रविना न्यौपाने लगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा विद्यालयका प्राचार्य मुकुन्दराज उप्रेतीले विद्यालयका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
सह–प्राचार्य विमल तिवारीको स्वागत तथा कार्यक्रम संयोजक कृष्ण केसी र शिक्षक विशाल गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
सिद्धार्थ बक्तृत्वकला प्रतियोगितामा दिप बोडिङका श्रीजल प्रथम :-
चौथो जिल्ला स्तरिय अन्तर माध्यमिक विद्यालय स्तरिय सिद्धार्थ बक्तृत्वकला प्रतियोगितामा दिप बोडिङ स्कुलका श्रीजल पोखरेल प्रथम भएका छन् ।
सिद्धार्थ अंग्रेजी आवसिय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिलोत्तमा ४ शंकरनगरको आयोजना भएको प्रतियोगितामा ३३ विद्यालयलाई पछाडि पार्दै श्रीजल प्रथम भएका हुन ।
प्रथम बनेका पोखरेलले नगद ७ हजार सहित शिल्ड र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे । त्यस्तै ग्रिन प्लान्टका असिम रेग्मी द्धितिय हुन सफल भए । उनले नगद ५ हजार सहित शिल्ड तथा प्रमाणपत्र हात पारे । प्रतियोगितामा तृतिय स्थान भने सगरमाथा आवशिय उमाविकी करिस्मा मरासीसिनी भईन । उनले नगद ३ हजार सहित मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरिन भने चौथो न्यू ईन्भारमेन्टका सुभास भुषाल भए ।
उनले नगद १ हजार सहित मेडल र प्रमाणपत्र हात पारे ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेक बहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा उत्कृष्ट एवं जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई सम्मान समेत गरिएको थियो ।
प्रतियोगिताकै अवसरमा आकृती स्मृती अक्षयकोषबाट कान्ति उमाविकी विनिता लामिछाने, सारदा टण्डन, पर्रोहा उमाविकी मनिषा क्षेत्री, कालिका उमाविकी पुजा आचार्य, सिद्धार्थ अंग्रेजी आवसियका संस्कार अर्याल र सुस्मिता सम्मानित भए ।
त्यस्तै भागिरथी देवि अक्षयकोषबाट शान्ती नमुनाकी रचना रेग्मी, भावना अर्याल सम्मानित भए भने कृष्ण गमिा स्मृती प्रतिष्ठानबाट शान्ती नमुनाकी भावना अर्याल, विपना कुँवर, सिद्र्धाबाट सन्चीता पन्थी, कुशुम क्षेत्री, बुटवल माविका लाल बहादुर गाहा र पुजा परियार सम्मानित भए ।
त्यस्तै सिद्धार्थ पदक द्वारा सिद्धार्थ अंग्रेजी आवसिय उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु सम्मानित भएका छन् । संस्कार अर्याल, विवेक पन्थी, सुस्मिता सारु, स्वत्तिका श्रेष्ठ, मानव घिमिरे, सागर अर्याल, विकास ज्ञवाली लगाएतका विद्यार्थीहरु सम्मानित भए ।
सम्मानित भएका उनीहरु सवैलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेक बहादुर थापा र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामलाल श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा सम्मान गरे ।
कार्यक्रम संयोजक रमेश बहादुर बस्यालको स्वागतमा भएको कार्यक्रममा स्रोत व्यक्ति शसी भण्डारी, अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य टुक बहादुर क्षेत्री, विद्यालयका प्राचार्य बावुराम खनाल, प्यारामाउण्ट उच्च माविका संस्थापक प्राचार्य दामोदर भुषाल, डन चिल्ड्रनका प्राचार्य कृष्ण खनाल लगाएतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए ।
प्रतियोगितामा निर्णायकको भुमिका प्रा. बालकुष्ण भट्टराई, बुद्ध बहादुर बस्नेत र राजेन्द्र अर्यालले गरेका थिए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामलाल श्रेष्ठको अध्यक्षता, जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेक बहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन रजनिस चन्द्र गुप्ताले गरेका थिए ।
आईडिएलका बिद्यार्थिले बाँडे फलफुल:-
आईडिएल ईङ्गलिस बोडिङ स्कुल बुटवलका जुनियर रेडक्रस सर्कलका बिद्यार्थिले अस्पतालका बिरामिलाई फलफुल बितरण गरेका छन् । बिद्यार्थिले सिद्धार्थ महिला तथा बालबालीका अस्पताल बुटवल दिपनगरका बिरामि र बिरामीका कुरुवालाई फलफुल बितरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा अस्पतालका डाईरेक्टर बिनोद पराजुली, आईडिएल ईङ्गलिस बोडिङ स्कुलका संस्थापक प्रार्चाय जनक प्रसाद न्यौपाने, सहप्रचार्य प्रकाश ज्ञवाली, प्रवन्ध निर्देशक आशिश न्यौपाने लगाएत जुनयर रेडक्रस सर्कलकी अध्यक्ष प्रज्ञा शर्मा सहित बिद्यार्थिले फलफुल बितरण गरे ।
सो अवसरमा बोल्दै बिद्यालयका संस्थापक प्रार्चाय जनक न्यौपानेले बिद्यार्थीलाई सामाजीक भावनाको बिकाश गराउन अस्पतालमा फलफुल बितरणमा सहभागि गरईएको बताए । बिद्यालयले बार्षिक कर्यक्रम अन्र्तगत शनिवार बिदेयालयमा जिल्ला स्तरीय चित्रकला प्रतियोतिा गर्ने बिद्यालयका प्रवन्ध निर्देशक आशिस न्यौपानेले जानकारी दिए ।
मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्चमाध्यामिक शिक्षा परिषद बुटवलका प्रमुख नोगेन्द्र खनाल नेपाल भलिवल संघका केन्द्रीय सदस्य टुक बहादुर क्षेत्री, जिल्ला भलिवल संघका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद श्रेष्ठ, बिद्यालयका प्राचार्य कृष्ण न्यौपाने, सह–प्रार्चाय माधव आर्चय, अतिरक्त क्रियाकलाप प्रमुख भिमसेन श्रेष्ठ, कार्यक्रमका संयोजक अर्जुन धिमिरे लगाएतले बोलेका थिए ।
साई ग्लोवल टि २० क्रिकेट प्रतियोगिता,साई ग्लोवल उच्च मावि र अक्सफोर्ड उच्च माबि बुटवल बिजयी :-
साई ग्लोवल कलेज भैरहवाको आयोजनामा जारी भैरहवामा जारी साई ग्लोवल टि २० क्रिकेट प्रनितयोगता अन्तरगत भएका दुई बटा खेलमा साई ग्लोवल उच्च मावि र अक्सफोर्ड उच्च माबि बुटवल बिजयी भएका छन् ।
साई ग्लोवल र अक्सफोर्ड उच्च मावि वीच भएको पहिलो खेलमा साई ग्लोवल २८ रनले बिजयी भएको छ । साई ग्लोवलले व्याटिङ गर्दै ६ विकेटको नोक्सानीमा १ सय २७ रन बनाएको थियो । २० ओभरको खेलमा साई ग्लोवलका सुवास कार्कीले ३८, बल बहादुर थापाले १८ तथा आसुतोष कुमार र आवेश कणेलले १५-१५ रन बनाएका थिए । राममणिको तर्फबाट वलिङ गर्दै निशान्त शर्मा र अनुराग थापाले समान २-२ विकेट लिएका थिए ।
राममणिको तर्फबाट व्याटिङ गर्दै ओमान गुरुङले २२ र दामोदर बस्यालले २५ रन बनाएका थिए ।
राममणीको टिम ९९ रनमा अल आउट भएको थियो ।साई ग्लोवलको तर्फबाट वलिङ गर्दै अरुण चौधरीले ४ विकेट तथा वल बहादुर थापा र आबेश कणेंलले २-२ विकेट लिएका थिए । प्रतियोगितामा साई ग्लोवलका अरुण चौधरी म्यान अफ दी म्याच घोषित भएका थिए ।
त्यसैगरी आजै भएको दोश्रो खेलमा अक्सफोर्ड कलेज युसिएमएस भैरहवालाई २७ रनले पछि पार्दै बिजयी भएको छ । अक्सफमेर्डले पहिला व्याटिङ गर्दै २० ओभरको खेलमा ६ विकेटको नोक्सानीमा १ सय २३ रन बनाएको थियो । अक्सफोर्डको तर्फबाट व्याटिङ गर्दै संगम क्षेत्रीले ४३ र सुरज दरईले ४० रन बनाएका थिए ।युसिएमएसको तर्फबाट वलिङ गर्दै सिवाङकरले २ विकेट तथा प्रभात र मनिषले १-१ विकेट लिएका थिए । युसिएमएस ९६ रनमा अलआउट भएको थियो ।
वलिङ तर्फ अक्सफोर्डका अंकित केसीले ४ विकेट तथा संगम क्षेत्रि र रविन खड्काले २-२ विकेट लिएका थिए । अक्सफोर्डका संगम क्षेत्री म्यान अफ दी म्याच घोषित भएका छन् ।